दिलीपकुमार मुनकर्मी – एकै दिनमा आउने ठूलो उतारचढाव र उनीहरूको संस्थागत सुधार, नियामकको अवस्था तथा मुनाफामा प्रगतिले समग्र बजार क्र्यास हो भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन । सेयर बजारमा अहिले क्र्यास र बियरिस निकै चलेका र चलाइएका शब्द हुन् । करिब …
विष्णु ढकाल – पछिल्ला तथ्याँङ्कहरुले नेपालको झण्डै ३० लाख घरपरिवार लघुवित्त क्षेत्रसँग प्रतक्ष्य आबद्ध रहेको र लघुवित्तमा आबद्ध हुने अधिकांश महिला रहेको देखाएको छ । गरिबी निवारणको प्रमुख अस्त्रको रुपमा संसारभर लघुवित्तलाई हेर्ने गरीएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा समेत लघुवित्त क्षेत्रले गरिबी निवारण …
उपेन्द्र पौडेल । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढी प्रवाह गरे भनेर त्यसलाई अस्वभाविक तबरले व्याख्या भईरहेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा बढाउ भनेर केन्द्रीय बैंकले भन्नुलाई पनि यहाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी बढाएको भनेर उल्टो व्याख्या …
रामप्रसाद दाहाल- धेरैको हृदयमा गाढिएको पिरतीको खेलाजस्तै लाग्ने मुद्रा वर्तमान जीवनका पाटामा फन्को मारिरहेको छ । शेली गमनले भनेका थिए–‘मुद्रा एउटा त्यस्तो वस्तु हो, जो सर्वमान्य छ ।’ अनि मलाई याद आउँछ, हामीलाई पढ्दा घोकाइएको थोमस, शेली, प्रो. केन्ट, झाउथर, …
आज कर्जा लिन होडबाजी गर्ने धेरै छन् । कर्जामात्रै सबैचिजको समाधान होइन । जव सम्म उद्यमशिलताको विकास हुँदैन तबसम्म त्यो कर्जा बोझ मात्रै हुन्छ । यदी काम गर्छन र कामको सदुपयोगिताका लागि कर्जा लिन्छन भने त्यो चाहिँ फेरी एउटा उर्जा …
पछिल्लो बैंकहरुको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा बढेको छ । यसलाई हामीले सार्है राम्रो संकेतका रुपमा बुझेका छैनौँ । वाणिज्य बैंकको लगानी अलि गलत बाटोतिर पो गएको हो कि भन्ने हाम्रो बुझाई हो । मैले बारम्बार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यक्रममा भन्ने …
‘यी हुन् पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुनुका प्रमुख कारणहरु’
डा. रामशरण महत – नेपालमा पुँजीगत खर्च नहुुनुको प्रमुख कारण सुशासनको अभाव हो । हाम्रो एजेन्डा राष्ट्र विकास तथा आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित छैनन् । हाम्रो भाषणमा आर्थिक मुद्धा छ तर प्रथामिकतामा राजनीति छ । सन् १९९० मा दक्षिणी एसियाली देशको प्रतिव्यक्ति …
कर्मचारीबाटै सुरक्षित छैनन् बैंकहरु (सुमन बिडारीको चोटिलो टिप्पणी)
बैंकिङ प्रविधिको तीव्र बिकास सँगै बैंकिङ सुरक्षा नेपालमा थप चुनौतिपूर्ण बन्दै आएको छ । राष्ट्रिय गिरोहदेखि अन्तराष्ट्रिय गिरोहसम्मले बैंकिङ सुरक्षालाई चुनौति दिइरहेका छन् । बैंकको डाटा चोर्नेदेखि लिएर एटिएमको पीन नम्बर चोरेर निक्षेपको रकम हडप्नेसम्मको गतिबिधि पछिल्लो समय बढ्दै आएको …
स्टक एक्सचेन्ज केन्द्र एकदमै व्यस्त बजार बनेको छ । तथापि, स्टक बजारबारे केही नबुझेका मानिसहरू स्टक बजारमा ‘जम्प’ गरेको पाइन्छ । जसका कारण उनीहरुले आफ्नो लगानी गुमाइरहेका छन् । सेयर किन्न जानुभन्दा पहिले नै मैले किनेको मुल्यभन्दा तल गयो र …
नरेन्द्र चुदाली – सेयर बजार बाहिरबाट हेर्दा जति सजिलो देखिन्छ, वास्तविक रुपमा त्यस्तो हुँदैन । सेयरमा लगानी गरेर नाफा कमाउने चाहाना सबैको हुन्छ । तर कमैले मात्र त्यो चाहाना पुरा गर्न सकेका हुन्छन् । सेयरमा गरिने लगानी एउटा त्यस्तो लगानी …
प्रा. रामप्रसाद दाहाल- वर्तमानलाई बेचेर भविष्यलाई किन्छु भन्ने अर्थमा आजको पुस्ताले आफूलाई उद्योग व्यापार व्यवसायमा घोलिरहेको हुन्छ । अनि त्यही व्यवसायिक जीवनभित्र आफ्नो भोगाई र भविष्यको समालोचना गरिरहेको हुन्छ । अनि हामी भनिरहेका हुन्छौं–अर्थ क्षेत्रमा आउनेहरुको गहन चेतना र राष्ट्रिय जिम्मेवारीको …
उत्सव राज जोशी – “ग्रामिण विकासको आधार लघुवित्तको गुणात्मक विस्तार” भन्ने मुलमन्त्रका साथ अघि बढिरहेको यस छिमेक लघुवित्त विकास बैंकले समयसापेक्ष सदस्यहरुको आवश्यकता र मागलाई ध्यानमा राखी आफ्ना सेवा सुविधाहरुमा परिमार्जन गर्दै आईरहेको छ । बि.सं. २०५८ सालमा लघुवित्त सेवालाई बैंकको …
ढुन बहादुर बुढाथोकी,“सङघर्ष”- साझा वा बिशेष व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि पुँजी, जोखिम, प्रतिफल र उत्तरदायित्वमा हिस्सेदारी जाहेर गर्ने पृथक अस्तित्व बोकेका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु बीचको औपचारिक/कानूनी सहकार्य हो, रणनीतिक साझेदारी । आपसिक सदभाब/बिश्वास, पारदर्शीता, समूह कार्य, प्रष्ट सञ्चार, सफलताका आधारभूत मापदण्डहरु साझेदारीमा …
रामचन्द्र भट्टराई – सेयरमा लगानी गर्नु भनेको त्यसको तत्कालै प्रतिफल लिनको लागि होइन । त्यसबाट फाइदा लिनको लागि निश्चित समय लाग्छ । अहिलेकै स्थितिलाई हेर्ने हो भने सेयर बजारकोे भविष्य उज्जवल छ । त्यस्तै सेयरमा लगानी गरेर भविष्यमा राम्रो प्रतिफल …
जनार्दन देव पन्त । नेपालमा करिब ३ करोड जनसंख्या छन् । यहाँ जीडिपी २४ बिलियन डलरको छ भने प्रति व्यक्ति आय करिब ८ सय डलर छ । सामान्यतया ३० लाख मानिस भारत बाहेक अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका छन्, ५० लाख …